Fomba fanabeazana ny ankizy mifanaraka amin'ny Baiboly ▷ ➡️ Mahita an-tserasera ▷ ➡️
Ahoana no hampianarana ny ankizy araka ny Baiboly
Fomba fanabeazana ny ankizy araky ny Baiboly. ny tompon'andraikitra mivantana amin'ny fanabeazana ny zanany ny ray aman-dreny. Noho izany dia tsy maintsy ampianarin'izy ireo amin'ny lalan'ny Tompo amin'ny fitiavana tsy misy fepetra izy ireo, fahatsapana andraikitra sy fahendrena.
Un tontolo iainana mahasalama sy voalanjalanja Ilaina ihany koa ny fanampiana ny fivelaran'ny ankizy amin'ny fiforonany ara-tsosialy, ara-batana, ara-pihetseham-po, ara-tsaina ary ara-panahy, amin'ny taona sy dingana rehetra amin'ny fiainana.
1 Fomba fanabeazana ny ankizy mifanaraka amin'ny Baiboly tsikelikely
1.1 1. Mampianara mitia an'Andriamanitra sy ny mpiara-belona
1.2 2. Mampianara amin'ny ohatra
1.3 4. Ampianaro ny fankatoavana
1.4 4. Ampianaro ny vokatry ny fanapahan-kevitra ratsy
1.5 5. Mampianatra ny soatoavina sy ny fitsipiky ny Kristiana
1.6 6. Mampianatra amin'ny fanatrehanao
2 Fomba fanabeazana ny ankizy arakaraka ny Baiboly tsikelikely
2.1 Ahoana ny fomba fanabeazana ny zaza araky ny Baiboly
2.2 Fomba fanabeazana ny ankizy araky ny Baiboly
2.3 Fomba fanabeazana ny tanora araka ny Baiboly
2.4 Fomba fanabeazana ny tanora sy ny olon-dehibe araky ny Baiboly
Fomba fanabeazana ny ankizy mifanaraka amin'ny Baiboly tsikelikely
1. Mampianara mitia an'Andriamanitra sy ny mpiara-belona
Ampianaro ho tia an'Andriamanitra, hihaino ary hankato ny Teniny Io no fampianarana tsara indrindra azonao avela ho an'ny zanakao. Jesosy koa dia mitarika antsika amin'ireo didy lehibe ireo: tiavo Andriamanitra mihoatra ny zava-drehetra ary ny namanao tahaka ny tenanao.
Ary tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Izany no didy lehibe.
Ary ny faharoa dia mitovy amin'izany: ho tianao ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy baiko hafa lehibe noho ireto.
Marka 12: 30-31
2. Mampianara amin'ny ohatra
Aoka ianao ho ohatra tsara ho an'ny ankizyTsy asa mora izany, saingy fototra mba hananan'izy ireo referansa manan-danja amin'ny fiainanao. Toa ny apostoly Paoly, dia tsy maintsy manahaka an'i Kristy isika, mba hanahaka azy amin'ny alalantsika ny ankizy.
Tahafo aho, tahaka ny anahafako an'i Kristy.
1 Korintiana 11: 1
4. Ampianaro ny fankatoavana
La Ny fankatoavana dia singa iray lehibe amin'ny fanabeazana ny zaza rehetra. Raha tsy afaka mampiditra fankatoavana ianao dia tsy ho afaka hampiorina ny fanajana ny hafa, noho izany dia tsy maintsy ampianarinao izy hankatò:
Ho an'ny ray aman-dreny.
Anaka, maneke ny ray aman-dreninao ao amin'ny Tompo, satria marina izany.
Manajà ny rainao sy ny reninao, izay didy voalohany misy teny fikasana.
mba hahita soa ho anao izy, ary ho lava andro iainana eto an-tany. Efesiana 6: 1-3
Ho an'ny manampahefana.
Fa noho ny Tompo, maneke ny fanjakana rehetra, na amin'ny mpanjaka, na amin'ny ambony,
ary ho any amin'ny mpanapaka, araka izay nirahiny hanasazy ny mpanao ratsy sy hidera izay manao tsara.
Fa izao no sitrapon'Andriamanitra: ny manao ny tsara dia hampitsahatra ny tsy fahalalan'ny olona adala; 1 Petera 2: 13-15
Fanajana sy fanetren-tena eo imason'ny olona rehetra.
Manaja ny rehetra. Tiavo ireo rahalahy. Matahora AN'ANDRIAMANITRA. Manajà ny mpanjaka. 1 Petera 2:17
4. Ampianaro ny vokatry ny fanapahan-kevitra ratsy
Ny zanakao, mandritra ny androm-piainany, dia handray fanapahan-kevitra diso tsy tambo isaina ary azo antoka fa hisy fiatraikany amin'ny tenany sy amin'ny hafa izany. Noho izany dia tokony hampianatra an'ity lesona ity ianao amin'ny alàlan'ny hatsarana, fahamarinana ary fetra.
Anaka, aza manamavo ny famaizan'i Jehovah,
Aza sasatra amin'ny fanitsiana azy;
Satria manasazy ireo tiany ny Tompo,
Toy ny ray amin'ny zanaka tiany.
Ohabolana 3: 11-12
5. Mampianatra ny soatoavina sy ny fitsipiky ny Kristiana
Ny tontolo tsy manana fitsipika tsara, indrindra ny soatoavina kristiana toy ny: ctoetra, fahamarinana, tsy fivadihana ary fahamarinana. Ampianaro ny zanakao mba handray soa amin'ny voany tsara ny fiainana eo amin'ny fiaraha-monina, ny natiora ary ny olona.
Ry rahalahiko, ny aviavy ve mamoa voan'oliva, na ny voaloboka mamoa voa? Toy izany koa tsy misy loharano afaka manome rano masira sy mamy.
Iza aminareo no hendry sy manam-pahalalana? Asehoy amin'ny fitondrantena tsara ny asanao amin'ny fahalemem-panahy.
Jak. 3: 12-13
6. Mampianatra amin'ny fanatrehanao
Ny fisian'ny ray aman-dreny dia ilaina amin'ny fanabeazana ny zanany. Zava-dehibe ny fanatrehana ny fiainan'ny zanakao amin'ny dingana rehetra amin'ny fiainany.
Ampianaro handeha ilay zaza,
Ary na dia antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany.
Ohabolana 22: 6
Fomba fanabeazana ny ankizy arakaraka ny Baiboly tsikelikely
Ahoana ny fomba fanabeazana ny zaza araky ny Baiboly
Amin'ity dingana voalohany ity dia mitranga amin'ny alàlan'ny fampivoarana ny zaza ny fifandraisana eo amin'ny lahy sy ny vavy, ny fanentanana ny fahatsapana ary ny fifandraisana amin'ny tontolo ivelany. Ny ray aman-dreny dia tsy maintsy ampianaro am-pitiavana ny zaza, manaraka ny ohatra nasehon'ny Ray any an-danitra miaraka amintsika. Tandremo tsara sy be fitiavana, mitandrema amin'ny zavatra ilain'izy ireo amin'ny sakafo, fiononana ary fiarovana.
Hanadino izay niterahany ve ilay vehivavy, hitsahatra tsy halahelo ny zaza ao an-kibony? Na manadino aza izy dia tsy hanadino anao mihitsy.
Isaia 49: 15
Fomba fanabeazana ny ankizy araky ny Baiboly
Ny ankizy kely dia mila fifantohana betsaka sy fanentanana tsara hampivelatra ny fahaizany. Ity dia dingana amin'ny fakana tahaka, ny antony, koa amin'ny fanitarana ny zavatra hita ary fametrahana soatoavina sy fetra manan-danja. Mampivelatra ny toetrany sy ny toetrany ny ankizy amin'ity sehatra ity. Tiavo ary mametraha fetra, miteny "eny" sy "tsia" miaraka amina fitiavana sy fahefana mitovy. Noho izany, eNomarihiny hatramin'ny voalohany ny fitsipiky ny Kristianisma.
Miezaha ho modely tsara ho an'ny zanakao. Hianaranao mora foana ny fihetsika sy ny fitondran-tenan'ireo maodely akaiky indrindra, miaraka amin'ireo fanao hita eo amin'ny tontolo iainanao. Ampianaro ny zanakao hatramin'ny fahazazany ka tia ny fampianaran'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny Baiboly, la vavaka isan'andro ary fahazarana mahasalama hafa.
Koa manahafa an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala.
Efesiana 5: 1
Fomba fanabeazana ny tanora araka ny Baiboly
Io ilay antsoina hoe "dingana sarotra" ho an'ny ankizy. Ny toetra amam-panahy amin'ny endrika sy toetra iray dia toa manandrana manery tena. Fotoana izao mitazona fifanakalozan-kevitra misokatra ary mangoraha amin'ny fotoana fotoanan'ny krizy mety hitranga. Ny fitsipiky ny fahalalana dia azo tototry ny toe-javatra mampidi-doza, ny fitaomana ratsy, ary ny zavatra iainana mampidi-doza, ka mendrika izany:
Tohizo ny fifandraisana salama.
Tsy mankasitraka fitondran-tena ratsy tsy misy tahotra ny fifanandrinana ilaina.
Torolalana am-pitiavana, fanajana ary fahendrena.
Amporisiho izy ireo hihazona a fatokisana mafy hoe iza zanak'i.
Ahoana ny fomba fanabeazana tanora sy antitra araka ny Baiboly
Ny ray aman-dreny manan-janaka amin'ity dingana ity dia mety ho azy ireo namana mahafinaritra, mpiara-dia ary mpanolotsaina tsara. La Tena ilaina tokoa ny fiainam-piainan'ny ray aman-dreny manampy sy mitarika ny zaza lehibe amin'ny fanapahan-keviny manokana, mandritra ny androm-piainany ary amin'ny fianakaviana ho avy.
Izany no izy! Manantena izahay fa hanampy anao hahatakatra ity lahatsoratra ity ny fomba fanabeazana ny ankizy araky ny Baiboly. Raha liana hahafantatra ianao nanao ahoana ny famoronana an'izao tontolo izao raha ny Baiboly, manohy mizaha Discover.online.
Fomba handresena ny famoizam-po araka ny Baiboly
Ahoana ny famoronana izao tontolo izao araka ny Baiboly